SSK4days ago
Visitor is reading Traveling while GC is lost
Visitor is reading 90000 per month in nepal
Visitor from RU is reading Classifieds Summary: Jobs in NY, Room/Apt in ,NY,VA
Visitor from RU is reading नमरी स्वर्ग देखिन्न्न / नपरी भोगिन्न !!!
Visitor from DE is reading Solidarity to Newar’s struggle for Cultural Rights.
Visitor is reading Quicky or love...
Visitor is reading Leaving F1 after applying for AOS ???
[VIEWED 804 TIMES]
Posted on 07-31-20 5:59 PM Reply [Subscribe]
बिहान एउटा सानो गन्थन लेख्न खोजेको थिए, लेख्ने भ्यैएन । तेस्पछि तेस्को सिर्सक मात्र लेखेर छोडेको थिए content भरे काम बाट फर्केर लेख्छु भनेर, ऐले content add गर्छु भनेको सिर्सक नै छैन। admin ले बेबारसे भनेर सिर्सक delete गर्दिनु भएछ । ऐले content छ सिर्सक छैन ।
Posted on 07-31-20 6:01 PM [Snapshot: 3] Reply [Subscribe]
टाउको नभएको पुच्छर काटेर फालिदिए हुन्छ ;)
पक्कै पनि कामलाग्ने छैन होला ;) ..
Posted on 07-31-20 6:19 PM [Snapshot: 43] Reply [Subscribe]
टेस्ता लाई ताई न तुई भंछन क्यारे । टास टास भाई हामी पड़छौ , तिम्रो लेखनी रमाइलो हुंछ । “बीयर ले पखालेर खाएको “ वाला चै नहोस है । तेस्तो पढ़ने अली मूड छैन :)
Posted on 08-01-20 10:00 AM [Snapshot: 355] Reply [Subscribe]
हुनत हो बुढाहरु content एक किसिमको बकवास नै थियो । title भेटियो " रैना मैसाप " । यो "प्रकट पंगेनी " दाईको एउटा गजलको सिर्सक हो । उनले यो गजल पोखरामा दसक पहिले बाचन गरेका थिए । उनको गजलका त्यो बेलाका दर्सक स्वयंम तेतिबेलाका निलम्बित महाराज थिए। महाराज जता जता गयो काँग्रेस, एमाले अनि माओबादी बिरोध गर्दै हिड्थे। तेतिबेला राजा खोक्दा नि सबै को एकै स्वोर हुन्थियो " प्रतिगमन सल्बलायो "। अब title भेटियो content चै फेरी हरायो । खोज्दै छु ।